Smartphone – Page3– Myanmar Mobile App
Nokia7Plus စမတ်ဖုန်းရဲ့သုံးသပ်ချက်
Zawgyi Version ထိချက်ပြင်းတဲ့ဒီဇိုင်း၊ ကင်မရာလန်းလန်း၊ Android One တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင် Nokia7Plus ကို စဉ်းစားသင့်တယ်။ Nokia ရဲ့ comeback ရာဇ၀င်ကလည်း HMD Global ရဲ့ ဘတ်ဂျက်ဈေးကွက်ကို ဦးတည်မှုနဲ့အတူ အောင်မြင်နေခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်က Android ဖုန်းခြောက်လုံးအထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့လို ဈေးကွက်တွေကို ဦးတည်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ Nokia ရဲ့ အမည်ကထင်ရှားနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ခြောက်လုံးမှာ လေးလုံးကတော့ ဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Nokia 8 နဲ့ Nokia7တို့ကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့လေ။ Nokia 8 ကတော့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာရနိုင်တဲ့ဖုန်းဖြစ်ပြီးတော့ Nokia7Plus ကို ဒီနှစ်မှာထပ်မံလုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ အဲဒီဖုန်းကတော့ […]
Posted on April 22, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comments(2)
Nova 3e စမတ်ဖုန်းအကြောင်းသုံးသပ်ချက်
Zawgyi Version Nova 3e တစ်ဖြစ်လဲ P20 Lite ကတော့ Huawei ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် စွမ်းဆောင်ရည်သင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ အချက်အလက်ခပ်မိုက်မိုက်တွေကြောင့် လူကြိုက်များနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်နွေဦးလောက်မှာ Huawei က စမတ်ဖုန်းသုံးလုံးကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဈေးအသက်သာဆုံးကတော့ P20 Lite ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုယ်ထည်အချိုးကတော့ ၈၀% ဖြစ်ပြီး facial recognition feature ၊ ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ notch လေးပါနေခြင်းကလည်း ဒီနေ့ခေတ်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာ ကိုယ်စားပြုနေသလိုပါပဲ။ ထွက်ရှိခဲ့သောရက် Huawei P20 Lite ကတော့ မတ်လ၂၀၁၈ မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အတော်လေးယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ ဈေးကွက်ဝင် စွမ်းဆောင်ရည်သင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Motorola Moto X4 ၊ HTC […]
Posted on April 20, 2018 April 20, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Huawei ရဲ့ နောကျဆုံး flagship တှကေတော့ အကောငျးဆုံး Android ဖုနျးတှဖွေဈပါတယျ။ စမတျဖုနျးတှဆေိုတာ တောကျပ၊ ဈေးကွီးတဲ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှဖွေဈပါတယျ။ ပွီးတော့ ဘာတှကေမြားအာရုံစိုကျမှုကို ရစနေိုငျသလဲဆိုတာ သတျမှတျဖို့လညျး ခကျခဲသှားပါပွီ။ ငှကွေေးကလညျး စိတျဝငျစားမှုကို ဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Huawei P20 နဲ့ P20 Pro တို့ကတော့ တနျဖိုးကို ရိုးရိုးလေး ပေးထားပါတယျ။ ခံ့ညားပွီး တငျ့တယျတဲ့ဖနျသားပွငျတညျဆောကျမှုနဲ့ ကငျမရာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဒီဖုနျးကို Android ဖနျတှတေမျးတမျးစှဲဖွဈနရေခွငျးက ကငျမရာနဲ့ ဒီဇိုငျးကိုဖယျထားလိုကျမယျဆိုရငျ သူ့ရဲ့ software ကွောငျ့ပါ။ EMUI က အလှနျကွီးကောငျးမှနျအောငျလုပျဆောငျထားတာမြိုးမဟုတျပမေယျ့လညျး တညျငွိမျလာတယျလို့ပွောရမယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီဖုနျးကိုဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့၊ ဝယျသငျ့တဲ့အခကျြကွီးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ review လုပျသှားမယျ့ဖုနျးကတော့ နှဈကဒျထိုးဖွဈပါတယျ။ ဥရောပနိုငျငံတှမှောတော့ တဈကဒျထိုးရောငျးတာမြားလို့ပါ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ […]
Posted on April 20, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Huawei ရဲ့ နောက်ဆုံး flagship တွေကတော့ အကောင်းဆုံး Android ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေဆိုတာ တောက်ပ၊ ဈေးကြီးတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာတွေကများအာရုံစိုက်မှုကို ရစေနိုင်သလဲဆိုတာ သတ်မှတ်ဖို့လည်း ခက်ခဲသွားပါပြီ။ ငွေကြေးကလည်း စိတ်ဝင်စားမှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Huawei P20 နဲ့ P20 Pro တို့ကတော့ တန်ဖိုးကို ရိုးရိုးလေး ပေးထားပါတယ်။ ခံ့ညားပြီး တင့်တယ်တဲ့ဖန်သားပြင်တည်ဆောက်မှုနဲ့ ကင်မရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းကို Android ဖန်တွေတမ်းတမ်းစွဲဖြစ်နေရခြင်းက ကင်မရာနဲ့ ဒီဇိုင်းကိုဖယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ software ကြောင့်ပါ။ EMUI က အလွန်ကြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့်လည်း တည်ငြိမ်လာတယ်လို့ပြောရမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဖုန်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့၊ ၀ယ်သင့်တဲ့အချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ review လုပ်သွားမယ့်ဖုန်းကတော့ နှစ်ကဒ်ထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတော့ တစ်ကဒ်ထိုးရောင်းတာများလို့ပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ […]
Posted on April 19, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Xiaomi Black Shark Phone ဗူးပါကင်အသစ်စက်စက်ကိုဖွင့်ဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်
Xiaomi နဲ့ Black Shark Technology တို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Black Shark စမတ်ဖုန်းကို ဂိမ်းကစားသူတွေ အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၈ မေလ ထဲမှာ ဒီဖုန်းကိုစတင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်တော့မှာပါ။ လောလောဆယ်တော့ Online ပေါ်မှာ Black Shark စမတ်ဖုန်းဂျပ်ဗူးအသစ်စက်စက်လေးကို ပါကင်ဖွင့်ဖောက်ကြည့်ရှုပြသထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေစတင်ထွက်ပေါ်လာပြီမို့ Black Shark စမတ်ဖုန်းကိုဝယ်ယူလိုသူတွေ ၊ စိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ ဒီဖုန်းနဲ့အတူ ဖုန်းဂျပ်ဗူးထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ ၊ ဖုန်းဂျပ်ဗူးလေးကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ပါကင်ဖောက်နေရတဲ့အလားကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါပြီ။ Xiaomi Black Shark စမတ်ဖုန်းကို ကျွန်တော်တို့ Myanmar Mobile App Store (MMAS) မှာလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Mobile App Store (MMAS) တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းအမျိုးမျိုး ၊ ဖုန်း […]
Posted on April 16, 2018 April 17, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments(2)
Oppo R15 နင့် R15 Pro စမတ်ဖုန်း သုံးသပ်ချက်
Oppo က ကမ္ဘာ့ဒေသအနှံ့ကို တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နေပါတယ်။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယအပြင် အာရှဖုန်းဈေးကွက်မှာ ကုမ္ပဏီက ဈေးကွက်ကို မြှင့်တင်နေပါတယ်။ သူဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖုန်းများကိုသာ ထုတ်လုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ လူတိုင်း သုံးနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးနည်း စွမ်းဆောင်ရည်သင့် ဖုန်းများကိုပါ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းများဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖုန်းများနဲ့ ခွဲခြား မရအောင် ကောင်းနေရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်သလဲ ? ဒီလို တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများကို Oppo က R15 Series အသစ်များဖြင့် ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးကို သူ့ရဲ့ SoC နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ သူ့မှာ နောက်ဆုံးထုတ် Snapdragon ပါလား? နောက်ဆုံးထုတ် Exynos လား ? အရင်နှစ်က […]
Posted on April 16, 2018 April 16, 2018 Author myanmarmobileapp	Comment(0)
iPhone 8 Plus (RED) Unboxing [Video]
Apple မှ iPhone 8,8 Plus အနီရောင် (RED) Edition အသစ်စက်စက်လေးကိုဖုန်းဂျပ်ဗူးထဲကနေ ပါကင်ဖွင့်ဖောက်ကြည့်ရှုပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ iPhone7(RED) Edition တုန်းကနဲ့မတူတာက ဖုန်းနောက်ဘက်ခြမ်း အနီညိုရောင်ကိုယ်ထည်ကို လက်ရှိ iPhone 8,8 Plus တွေအတိုင်းပဲ နောက်ဘက်ခြမ်းကိုဖန်သားပြင်လေးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာကြောင့် နီညိုရောင်ကိုယ်ထည်လေးက ပိုပြီးတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေတာကိုမြင်ရမှာပါ။ ရှေ့ဘက်ခြမ်း Display Panel ကိုလည်း iPhone7(RED) Edition တုန်းကလို အဖြူရောင် Display Panel မဟုတ်ပဲ အနက်ရောင် Display ပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ iPhone 8 , 8 Plus (RED) edition ကို ကျွန်တော်တို့ Myanmar Mobile App Store […]
Posted on April 14, 2018 April 17, 2018 Author myanmarmobileapp	Comment(0)
Apple iPad 2018 ကို သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
Apple iPad 2018 ကို စပြီးတော့ သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ လူတိုင်းသိနေတဲ့ feature သစ်လေးနှစ်ခုကနေ စပြီးတော့ ပြောရမှာပါပဲ။ ဒါကတော့ ဒေါ်လာ၉၉တန် Apple Pencil ကို ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းနဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ပရိုဆက်ဆာ A10 “Fusion” ကို အသုံးပြုထားခြင်းပါပဲ။ သုံးစွဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မနှစ်က iPad နဲ့ကွဲပြားမှုကို သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ သင့်မှာ iPad တစ်လုံးရှိတယ်။ နည်းနည်းဟောင်းနေပြီဆိုပါတော့။ လဲဖို့အတွက်စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ ဘာတွေရှိနိုင်မလဲ။ Amazon က တက်ဘလက်တွေလား။ သူတို့ကတော့ Kindle အတွက်လောက်သာ ထုတ်ထားတဲ့ကောင်တွေပါ။ ဒေါ်လာ၅၀၀ထက်နည်းတဲ့ Windows တက်ဘလက်တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မထောက်ခံချင်ပါဘူး။ ChromeOS လည်းရှိတယ်။ အခု iPad လောက်တော့ မကောင်းဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်။ Android တက်ဘလက်တွေဆိုရင်တော့ […]
Posted on April 7, 2018 April 13, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on Apple iPad 2018 ကို သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
၂၀၁၈ ဧပြီလအတွက် အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးသုံးဖုန်းများ
Zawgyi Version သင်သုံးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးက ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေနဲ့ စီးပွားရေးအချက်အလက်တွေကို လုံခြုံအောင် သိမ်းနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့။ အကောင်းဆုံး – BlackBerry KEYone Black Edition BlackBerry ကတော့ ဖုန်းစီမံမှုနဲ့ လုံခြုံရေးပိုင်းမှာ ဆရာကြီးပါပဲ။ Android စနစ်အသုံးပြုပြီးချိန်မှာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ KEYone Black Edition နဲ့ဆိုရင် BlackBerry ကသာပေးနိုင်တဲ့ ကီးဘုတ်ခံစားချက်တွေကို ရရှိနိုင်မယ်။ KEYone ကတော့ Android လည်းသုံးချင်၊ physical keyboard လည်း သုံးချင်သေးတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေနိုင်ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီအတွက် စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Space Black model လေးမှာ RAM နဲ့ မမ်မိုရီတွေကလည်း ကောင်းပါတယ်။ အရောင်လေးကလည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆန်ပါတယ်။ စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက် – BlackBerry က သူ့ရဲ့ဂုဏ်တင်းကို […]
Posted on April 7, 2018 April 13, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on ၂၀၁၈ ဧပြီလအတွက် အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးသုံးဖုန်းများ
Huawei နဲ့ Lieca တို့ရဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကတော့ စမတ်ဖုန်းကင်မရာလောကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးတော့ အတော်လေးရှေ့ရောက်အောင် သွားနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ P20 Pro မှာ 40MP resolution အထိ ကင်မရာသုံးလုံးကို ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ရုပ်ပြသက်သက်သာမဟုတ်ပါဘူး။ Huawei P20 Pro ရဲ့ ကင်မရာစမ်းသပ်ချက်တွေမှာ ပြိုင်နိုင်စွမ်းတွေကို ကောင်းကောင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Huawei P20 Pro ကတော့ ကင်မရာအတွက် ချီးကျူးသံတွေညံနေပါတယ်။ အခြားသောစမတ်ဖုန်းရလဒ်များထက်ပိုကောင်းနေတဲ့အပြင် DxOMark ရဲ့ စမ်းသပ်သူတွေကလည်း လေးစားကြပါတယ်။ DxOMark ရဲ့ ရလဒ်တွေကို မသိရသေးပေမယ့်လည်း ကောင်းမွန်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ Huawei P20 Pro နဲ့ ကင်မရာစမ်းသပ်မှုတွေမှာ Huawei P20 Pro နဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ […]
Posted on April 5, 2018 April 13, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on Huawei P20 Pro camera review